Golaha Ammaanka oo ka arinsanaya Xaalladda Somalia Iyo muddo Kordhinta Hawlgalka AMISOM - Latest News Updates
Golaha Ammaanka oo ka arinsanaya Xaalladda Somalia Iyo muddo Kordhinta Hawlgalka AMISOM
Jadwal-hawleekda Golaha Ammaanka ee QM ee bishan May waxaa diiradda lagu saran doonaan Shirar Khaas ah oo looga wada hadlayo Xaalladaha Xasaasiga ee ka taagan dalalka Caalamka, gaar ahaan Khilaafyadda Siyaaso, Xuduud, Colaad iyo Hawlgalladda QM iyo Urur-gobaleedyadda kale ee Nabad-ilaalinta Caalamka..
Golaha Ammaanka ee QM waxaa bishan May guddoomiye ka noqonaya Wasiirka Arrimaha Dibedda ee dalka Malaysia, Retno Marsuudi.
Xubnaha Golahaasi waxay Kulan Dood Furan ka yeelan doonan Hawlgalladda Nabad-ilaalinta, iyadoo diiradda la saari doono Tababarka aad ugu fiican si loo horumariyo Ammaanka iyo Nabadda iyo waxqabadka la qorsheeyey ee Nabad-ilaaliyayaasha QM.
Kulamadda Golaha Ammaanka ee bishan May waxaa kaloo lagu eegi doona Badbaadinta dadka Rayidka ee Colaadaha, iyadoo diiradda lagu saarayo Kulamadda Mujtamacyadda, taasi oo micnaheedu yahay sidii loo xoojin lahaa Badqabka dadka Rayidka.
Waxay kaloo Goluhu ka wada hadli doonaan dhimista tiradda Ciiddanka AMISOM, inkasto oay qaar ka mid ah Dowladaha ay Ciiddanka ka joogaan Somalia ku gacan-sayreen inay dhimaan tiradda ciiddankooda, kuna hanjabay inay Ciiddankooda kala bixi doonaan Somalia, haddii uu saameeyo dhimista tiradda Ciiddankooda qeybta ka ah Hawlgalka AMISOM.
Dhinaca kale, xubnaha Golaha Ammaanka ee QM waxay Warbixin hordhac ah ka dhegeysan doonaan Ku-simaha Ku-xigeenka Ergayga Gaarka ee Xoghayaha Guud ee QM ugu qaabilsan Arrimaha Somalia, George Conway oo ku aadan xaalladihii ugu dambeeyey ee Arrimaha Somalia.
Golaha Ammaanka ee QM waxay kaloo kulamo bishan ka yeelan doonaan Xaalladda Siyaasadeed ee dalka Burundi, colaadaha Libya, Syria, Yeman, Lubnaan iyo Hawlgalka Ciiddanka wadajirka ee 5-ta waddan ee Galbeedka Afrika ee la isku yiraahdo dalalka Saaxil.